Google na - eme Android 12 ọrụ | Gam akporosis
Google na - eme Android 12 official
Anyị na-e ekwu okwu banyere mbata nke gam akporo 12. N'ikpeazụ Google kwadoro na beta nke mbụ n'ụdị DP1 ọ dịlarị maka ndị mmepe. Versiondị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ kachasị eji n'ụwa eme ihe na-eruwanye nso iru ọha na eze. Anyị ekwuola okwu banyere ọtụtụ posts ozi ọma na gam akporo 12 nwere ike ịdabere na ya na anyị na-ama na-atụ anya "na-esetịpụ."
Otu n'ime nnukwu amaghi mgbe ịmara na gam akporo 12 dị n'ụzọ, na-ama Ego ole ka mmelite ọhụụ a ga-erute?. Agbanyeghị nke ahụ adabereghị na Google ma ọ bụ ndị nrụpụta ga-eme mkpebi maka ụdị nke ga-aga n'ihu na-enye mmelite ọhụrụ ahụ. Na DP1 (Mmepụta Mmepụta) arụ ọrụ, ọ dị ka nke ahụ ọkwa ọkwa nke ọbịbịa nke gam akporo 12 na smartphones anyị dị nso.
1 Android 12 ugbua na onye mmepụta mbụ beta
2 Gam akporo 12 nzọ na nchekwa
3 DP1 bụ maka ndị mmepe naanị
Android 12 ugbua na onye mmepụta mbụ beta
Karịa mmụba ndị a tụrụ anya na ngwanrọ nke anyị ga-aza ugbu a, ihe anyi nile choro ugbua n'ihi na gam akporo bu a redesign nke ọdịdị ahụ, ma onye a abiala. N'ikpeazụ Android 12 na-eweta a ugbu a na anya nke oge a na ekwentị anyị. Ebe ọ bụ na ihe nkiri na ihu ụlọ anyị a na-emegharị ma gbanwee dabere na ọkwa na ozi natara. Na-emezi ihe ngosi kwupụta a minimalist imewe, mgbanwe na ntọala ntọala na nchịkọta nhọrọ, isiokwu ọhụrụ na itinye nke agba na ụda na-akpaghị aka ngwakọta na anyị akwụkwọ ahụaja.
Ihe na-adọta obere elebara anya bụ nke ahụ Enweela ike ikwenye nke ọ bụla n'ime nkwụsị ahụ na gam akporo 12 bụ ndị anyị nwetaworo. Anyị chọtara ohere ịmepụta wijetị wijetị na kọntaktị ahọrọ. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe dị na mmepe zuru oke, ọ ga-emeziwanye na DPs n'ọdịnihu. Anyị nwekwara obere animations Ha na-enye ihe na-ekpo ọkụ na "na;" nwa afọ gam akporo ahụmahụ.
Otu n'ime ihe ndị kasị ama leaks, nke nwekwara e nkwenye, bụ nke ịpịgharị screenshots. Ohere nke na-enyeworị ọtụtụ ọkwa nke nhazi gam akporo na nke ahụ na-abịa na gam akporo 12 gaa na nsụgharị mbụ. Na mgbakwunye inwe ike "ịgbatị" ebe anyị kwesịrị ịpịgharịa na ihuenyo anyị chọrọ iwe, anyị na- anyị ga-enwe ohere iji dezie ha. Anyị nwere ike itinye ederede na incluso anyị nwere ike icho mma ha ma mee ha obi ụtọ na-agbakwunye emoticons.
Gam akporo 12 nzọ na nchekwa
Nchebe nke ndị ọrụ gam akporo abụrụla ajụjụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ugboro ole ka iguru ma nu na Google nledo anyi? O bu okwu anyi nabatara dika okwesiri. Anyị amatala na ịnweta mgbasa ozi ahaziri iche mgbe anyị nabatara kuki niile na weebụsaịtị ọ bụla anyị na-agagharị. Mana gam akporo 12 tinye ihe omuma nke puru ime ka nchebe na ngwaike ngwaike, ihe a na-ahụtụbeghị mbụ, na-enye onye ọrụ mkpebi ikpe ikpeazụ n'ọtụtụ oge.
Na ụdị ọhụrụ nke gam akporo, site na nhazi ngwa ngwa, anyị nwere ike ịhọrọ mkpọchi mic. N'ụzọ dị otu a, enweghị ngwa ga-enwe ike ịnweta igwe okwu ma ọ bụ nụ ihe ọ bụla anyị na-ekwu. Ọzọkwa anyị nwere ike ime otu ihe ahụ na ese foto. Anyị nwere ike iji aka họrọ mgbe anyị chọrọ ka igwefoto ma ọ bụ igwe okwu na-arụ ọrụ ma ọ bụ. Site na nhọrọ ndị a rụọ ọrụ, anyị ga - emesị bụrụ ndị ọrụ, ndị na - ekpebi nnweta na igwefoto ma ọ bụ igwe okwu anyị.
Ihe ohuru nke gam akporo 12 ga - etinye n’ime ya bu otu aka mode. Thatzọ nke ahụ adighi enye ihe ohuru na iPhones, n'etiti ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ nwere nhazi nke ịhazi aha, na-anụ ụtọ ọtụtụ afọ. Ọ bụ ezie na ee ọhụrụ desktọọpụ mode kwesịrị pụrụ iche aha. Mgbe ole anyị na-ekerịta ihuenyo N'ime igwe anyị nwere nnukwu ihe eji enyo, usoro anyị na-enweta anaghị adị mma ma ọ bụ ọhụụ. Ọhụrụ a version anyị nwere ike ọbụna hazie ya nwere a ka mma karịa anya.
DP1 bụ maka ndị mmepe naanị
Dị ka betas niile, na ọtụtụ ndị ọzọ na nke mbụ nke nsụgharị ahụ, Android 12 adịghị kwụsie ike. Site taa ị nwere ike iwunye ma nwee obi ụtọ gam akporo 12 ọ bụrụ na i nwere Pixel. Ọ bụ ezie na nke a bụ ihe anyị na-adụ ọdụ mgbe niile ka ị ghara ime n'ihi ọtụtụ nsogbu, nsogbu a na-atụghị anya ya ma ọ bụ ọbụna data ọnwụ na anyị nwere ike ịta ahụhụ na nsụgharị na mmepe mmepe. N'oge Ọtụtụ ọnwa anyị ga-enwe DP dị iche iche, ihe dị ka rue etiti Eprel, nke ụdị nke gam akporo 12 ga-agbanwe na mmezi.
Ọ gaghị abụ ruo ọnwa nke Ike mgbe anyị nwere ike ịmalite nbudata na mbụ ọha ọha. Versionsdị nsụgharị ndị a ha nwere ọnwa nke mmepe ma ga-enye a ahụmahụ ọtụtụ kwụsie ike na yiri nke ikpeazụ. Otú ọ dị, ha ka bu nsụgharị ikpe ma ha agaghị enwe ahụhụ, kwụghachi na "nsogbu" ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ichere oge ọ bụla iji nwalee gam akporo 12 ọhụrụ, nke a bụ ohere gị. Ma cheta na ime ndabere tupu ị na-ata ahụhụ ọ bụla data ọnwụ.
Thebọchị enwere ike ịnweta Android 12 ịwụnye na ngwaọrụ anyị ga-adị nso ngwụsị August ma ọ bụ mmalite Septemba. Yabụ na ngwụsị oge ọkọchị, anyị ga - emecha nwee ike inwe nke ikpeazụ na 100% kwadosiri ike nke ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google nke anyị na - achọ Anyị ka ga-eche ọnwa ole na ole maka ya, mana ọ na-amasịkarị ịmara na anyị na-arụ ọrụ na ya.
Mgbe emechara gam akporo ohuru nye ndi mmadu, ọ ga-abụ aka nke ndị mmepe oyi akwa mmepe. Yabụ Xiaomi na Miui, ma ọ bụ Samsung na UIDịka ọmụmaatụ, ha ga-emegharị ụdị nke sistemụ arụmọrụ ha ma dezie ndepụta nke ngwaọrụ ndị ga-enwe ike ịnweta ụdị ọhụụ a. Mgbe ụfọdụ iji melite ahụmịhe ahụ ọbụna na mmejuputa iwu-nke arụmọrụ nke ụdị mbụ ahụ enweghị. Ma na otras ọtụtụ, iji belata ọrụ ahụ nke sistemụ arụmọrụ na-aga nke ọma ma dị mma na-enweghị mkpa mgbakwunye ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na - eme Android 12 official
Nchekwa akụrụngwa na-eme ka anyị hụkwuo nzuzo, ebe ọ bụ nzọụkwụ ọzọ megide mgbọrọgwụ, nke bụ naanị nchebe anyị n'ezie megide nledo
[Na] 9 coolest Androidsis egwuregwu nke February
Omuma Tengai bụ nloghachi nke onye na-agba agba agba agba na gam akporo